စနေ သားသမီးလေးတွေအ‌ကြောင်း - Update New
January 16, 2020 Naing ဗေဒင် 0
စနေသားသမီး​တွေဟာ များ​သောအားဖြင့်​ စိတ်​သ​ဘောထားပြည့်​ဝကြတယ်​စိတ်​ထား​ကောင်းကြတယ်​
သင်​ဟာ စနေသားသမီးနဲ့ ချစ်​သူဖြစ်​​နေပီဆိုရင်​ ဂုဏ်​ယူလိုက်​ပါ​တော့သူတို့ကိုလက်​လွှတ်​ဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့စနေသားသမီး​တွေက သူ့ရဲ့ချစ်​သူကို ​ပျော်​ရွှင်​​အောင်​ထားကြတယ်​သူ့ချစ်​သူကို စိတ်​ညစ်​​စေမယ့်​အပြုအမူမျိုးကို လုပ်​​လေ့မရှိဘူး။
တကယ်​လို့ သူ့ချစ်​သူက အ​ကြောင်းတစ်​ခုခု​ကြောင့်​စိတ်​ညစ်​​နေရင်​လည်း ​ပျော်​ရွှင်​လာ​အောင်​လုပ်​​ပေးတတ်​ကြတယ်​
ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့ဗီဇလို့​ပြောရမှာ​ပေါ့စနေသားသမီး​တွေက နည်းနည်း​တော့စိတ်​ကြီးကြတယ်​သူတို့ကို မဟုတ်​တာ​​ပြောရင်​ မကြိုက်​ကြဘူးစတာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ အတည်​​ပြောတာပဲြ​ဖစ်​ဖြစ်​ မကြိုက်​ကြဘူး
ဒါပေမယ့်​ စိတ်​တိုတဲ့အချိန်​ကလည်း နာရီဝက်​​တောင်​မကြာဘူးစနေသားသမီး​တွေကအချစ်​ကြီးကြတယ်​လူတစ်​​ယောက်​ကိုချစ်​ပီဆိုရင်​ သူ့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်​ကိုမကြည့်​ဘူး ရူးရူးမူးမူးစွဲစွဲလန်းလန်းချစ်​တတ်​ကြတယ်​
သူ့ချစ်​သူရဲ့အတိတ်​က မ​ကောင်းဘူးဆိုရင်​​တောင်​ အနာဂတ်​မှာ သူ့ချစ်​သူကို ​သေချာတိုင်​ပင်​ပြီးပြုပြင်​​ပေးတတ်​ကြတယ်​
စနေသားသမီးအများစုက​တော့ ရုပ်​ရည်​အားဖြင့်​ ရုပ်​ဆိုးတဲ့သူမရှိကြဘူးရှိခဲ့ရင်​လည်းနည်းတယ်​ရုပ်​ရည်​အသင့်​အတင့်​ရှိတဲ့သူကလည်း သူ့ရဲ့fashion နဲ့တင်​​ကြွေ​လောက်​တယ်​ရုပ်​​ချောပီဆိုရင်​​တော့ ဘယ်​သူမှလိုက်​မမှီဘူး
စနေသားသမီး​တွေက အရပ်​အားဖြင့်​ အရမ်းလည်း​မရှည်​ဘူးအရမ်းလည်းမပုကြဘူး အ​နေ​တော်​​လေးနဲ့ ချစ်​စရာအရမ်း​ကြောင်​ကြတယ်​
စကား​ပြောတဲ့အချိန်​တို့ ရာယ်​လိုက်​တဲ့ အချိန်​​တွေက​တော့ စနေသးသာမီး​တွေရဲ့ အလှပဆုံးနဲ့ ချစ်​စရာအ​ကောင်းဆုံးအချိန်တွေပါပဲ
မှန်ရင်Shareလိုက်တော့ စနေသားသမီးတွေ ။
စနသေားသမီး​တှဟော မြား​သောအားဖွငျ့​ စိတျ​သ​ဘောထားပွညျ့​ဝကွတယျ​စိတျ​ထား​ကောငျးကွတယျ​
သငျ​ဟာ စနသေားသမီးနဲ့ ခဈြ​သူဖွဈ​​နပေီဆိုရငျ​ ဂုဏျ​ယူလိုကျ​ပါ​တော့သူတို့ကိုလကျ​လှတျ​ဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့စနသေားသမီး​တှကေ သူ့ရဲ့ခဈြ​သူကို ​ပြျော​ရှငျ​​အောငျ​ထားကွတယျ​သူ့ခဈြ​သူကို စိတျ​ညဈ​​စမေယျ့​အပွုအမူမြိုးကို လုပျ​​လမေ့ရှိဘူး။
တကယျ​လို့ သူ့ခဈြ​သူက အ​ကွောငျးတဈ​ခုခု​ကွောငျ့​စိတျ​ညဈ​​နရေငျ​လညျး ​ပြျော​ရှငျ​လာ​အောငျ​လုပျ​​ပေးတတျ​ကွတယျ​
ဒါကလညျးသူတို့ရဲ့ဗီဇလို့​ပွောရမှာ​ပေါ့စနသေားသမီး​တှကေ နညျးနညျး​တော့စိတျ​ကွီးကွတယျ​သူတို့ကို မဟုတျ​တာ​​ပွောရငျ​ မကွိုကျ​ကွဘူးစတာပဲဖွဈ​ဖွဈ​ အတညျ​​ပွောတာပွဲ​ဖဈ​ဖွဈ​ မကွိုကျ​ကွဘူး
ဒါပမေယျ့​ စိတျ​တိုတဲ့အခြိနျ​ကလညျး နာရီဝကျ​​တောငျ​မကွာဘူးစနသေားသမီး​တှကေအခဈြ​ကွီးကွတယျ​လူတဈ​​ယောကျ​ကိုခဈြ​ပီဆိုရငျ​ သူ့ရဲ့ပစ်စုပ်ပနျ​ကိုမကွညျ့​ဘူး ရူးရူးမူးမူးစှဲစှဲလနျးလနျးခဈြ​တတျ​ကွတယျ​
သူ့ခဈြ​သူရဲ့အတိတျ​က မ​ကောငျးဘူးဆိုရငျ​​တောငျ​ အနာဂတျ​မှာ သူ့ခဈြ​သူကို ​သခြောတိုငျ​ပငျ​ပွီးပွုပွငျ​​ပေးတတျ​ကွတယျ​
စနသေားသမီးအမြားစုက​တော့ ရုပျ​ရညျ​အားဖွငျ့​ ရုပျ​ဆိုးတဲ့သူမရှိကွဘူးရှိခဲ့ရငျ​လညျးနညျးတယျ​ရုပျ​ရညျ​အသငျ့​အတငျ့​ရှိတဲ့သူကလညျး သူ့ရဲ့fashion နဲ့တငျ​​ကွှေ​လောကျ​တယျ​ရုပျ​​ခြောပီဆိုရငျ​​တော့ ဘယျ​သူမှလိုကျ​မမှီဘူး
စနသေားသမီး​တှကေ အရပျ​အားဖွငျ့​ အရမျးလညျး​မရှညျ​ဘူးအရမျးလညျးမပုကွဘူး အ​နေ​တျော​​လေးနဲ့ ခဈြ​စရာအရမျး​ကွောငျ​ကွတယျ​
စကား​ပွောတဲ့အခြိနျ​တို့ ရာယျ​လိုကျ​တဲ့ အခြိနျ​​တှကေ​တော့ စနသေးသာမီး​တှရေဲ့ အလှပဆုံးနဲ့ ခဈြ​စရာအ​ကောငျးဆုံးအခြိနျတှပေါပဲ
မှနျရငျShareလိုကျတော့ စနသေားသမီးတှေ ။
“ကျွန်တော် မသေချင်သေးဘူး ကြောက်တယ်”ဆိုပြီး မိဘတွေကိုကင်ဆာရောဂါကုပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ ကလေးငယ်
ကိုယ့်ကို ကြိုးချသေသည့် အမျိုးသမီးငယ် ၏ ဝိညာဉ်က မိခင် ကိုဝင် ပူးပြီး လုပ်ကြံခံရ ဟုပြောသဖြင့် အမှုဖွင့် ရန် စီစဉ်
Updatenew provide celebrity, life style, breaking news, local news and international news. Articles are displayed in text, video and photos. Visitors can read news in articles type of categories in https://updatenew.net/ (example – News, Entertainment, Sport, Health, Celebrities, Media & Music….etc). Hope our visitors enjoy our website.
Coronavirus အဆုတ်ရောင်ရောဂါပိုး နိုင်ငံအလိုက် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုအခြေအနေ ( ၂ဝ၂ဝ ဇန်နဝါရီ ၂၅ နံနက် ၈ နာရီခွဲ)
လုယက်မှုဖြင့် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေသူများကို ဖမ်းဆီးစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး ဓားထိုးခံရ
အချိန်တိုအတွင်း ဆိုင်ခွဲအများဆုံး စံချိန်တင်သွားတဲ့ ဇွဲထက် စိန်ရွှေရတနာဆိုင်ရဲ့ အဓိကကျတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၇၀၀ ကဘူတန်ဘုရင်တို့ရဲ့ အံ့ဩဖွယ်ဆက်စပ်မှုတစ်ခု